UPS gudbiyo patent inay aqbalaan Seeraar for lookarrada - Blockchain News
UPS gudbiyo patent inay aqbalaan Seeraar for lookarrada
Rafaa Global maraakiibta UPS eegaysaa aqbalayaan Seeraar adeegga labiska wax-is-dhaafsiga ah, gelintii patent dhowaan la daabacay muujiyaan.
UPS ayaa isha ku haya nidaamka bangiyada labiska in yeelan kartaa qaabab digital bixinta, sida ay codsi sii daayay by laga xoreeyo dalka ah. Patent iyo Astaanta Office (USPTO) Khamiista. Waxa intaa dheer in nidaamka lacag bixinta dhaqanka, xereynta patent ku taxan Seeraar sida lacagta a suurto gal ah in ay bixiyaan la.
xereynta wuxuu hoosta ka xariiqayaa habab kala duwan oo ay kireystayaasha bixin karin labiska, gaar ah oo sheegaya:
"In tusaale embodiments, bangiga labiska waxaa ka mid ah dhibic-of-sale a (POS) nidaamka loo raaco aqbalaadda bixinaha isticmaala qaab: … Seeraar; iyo / ama (5) nooc kasta oo kale ee ku habboon ee lacag bixinta. "
In 2017, in ka badan 20 gelintii patent sii daayay by USPTO ku xusan Seeraar sida nidaamka lacag bixinta ee suuragalka ah. Inkastoo tirada yar hoos uga dhacay 2016, in ka badan 50 gelintii patent sii daayay by hay'adda labadii sano ee la soo dhaafay ka tarjumaya line this fikirka.
The burburkii January ...
Post Previous:MasterCard ee Around The: Cryptocurrency iibsadaan waxaa kor kharashka macaamiisha
Post Next:Blockchain Observatory iyo Forum keena EU in "Safka hore" ee Blockchain Tech